Nanaitra An’i Shina Ny Fanalàna Ny Sivana Tamin’ny “V for Vendetta” · Global Voices teny Malagasy
Nanaitra An'i Shina Ny Fanalàna Ny Sivana Tamin'ny “V for Vendetta”	Voadika ny 10 Janoary 2013 22:39 GMT
Zarao: V for Vendetta, sarimihetsika iray mampitaintaina, izay efa voaràra hatrany amboalohany tao Shina, novokarina tamin'ny 2005 momba ny fiarahamonina nofinofy iray amin'ny hoavy, no nalefa tao amin'ny China Central Television Station (CCTV) fantsona 6 ny 14 Desambra 2012. Maro no gaga tamin'ny fandefasana azy ity, indrindra ilay sarontava V, izay ampiasain’ ireo mpikomy eran-tany ho mariky ny fanoherana ny famoretana ataon'ny fitondràna.
Ity video nampakarin'ny loveforchina tamin'ny Youtube ity dia ohatra iray anehoan'ireo mpikomy ny fampiasana ny sarimihetsika ho fanoherana ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona any Shina :
Izay no mahatonga ny fihetsiky ny CCTV ho vetivety dia lasa adihevitra mafana tao amin'ny sehatry ny bilaogy madinika Shinoa Sina Weibo. Napetraka ao amin'io sehatra io ny huati [zh], fifanakalozan-dresaka manaraka lohahevitra, izay nahangona tandavan-dresaka maherin'ny 3469 tao anatin'ny fotoana fohy.
Ankoatra ny lohateny, tsy navoaka ny votoatin'ilay sarimihetsika, araka ny nambaran'ny China Digital Times. Nasongadin'i [zh] LosAngels Angel fa ny Sampan-draharaham-Panjakana misahana ny Radio, ny sarimihetsika ary ny fahitalavitra (SARF) no tompon'andraikitra mivantana mitantana ny fandaharan'ny CCTV 6, izany no mahatonga ilay hetsika hanana fiantraikany ara-politika :
Nalaky ny fandraisan'ny bilaogera ny vaovao. Gaga ihany koa Brendon Connelly raha nahita ilay sarimihetsika :
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, polski, Français, Deutsch, عربي, አማርኛ, srpski, Português, 日本語, Català, 繁體中文, 简体中文, English